वाणिज्य मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीलार्इ भ्रष्टाचारको आरोप लगाए, अाेलीलाई सर्वोच्चमा रिट - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
18th December । मङ्लबार, पुस ३, २०७५
१रोनाल्डोलाई पछि पार्दै लिओन मेस्सीले जिते पाँचौं गोल्डेन बुट !!
२जाडोमा किन पर्छ चायाँ ? जान्नुहोस् यसबाट बच्ने उपायहरु !
३के प्रभाषले अनुष्कालाई डेट गरिरहेका छन् ? (जान्नुहोस्)
४२८ बर्ष यता कै खराब पदर्शनले युनाइटेडका मौरिन्हो बर्खास्त
५मेस्सीले ३१ औं ह्याट्रिक गर्दै बने शीर्ष गोलकर्ता
६पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको मंगलबार बिहान निधन
७वैद्यले भने : विप्लवसँग छिट्टै एकता हुन्छ, ‘सच्चा कम्युनिस्ट आवश्यक छ’
८यस्तो छ आज पौष ०३ गते, मङ्गलवार तपाईहरुको राशिफल
वाणिज्य मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीलार्इ भ्रष्टाचारको आरोप लगाए, अाेलीलाई सर्वोच्चमा रिट
प्रकाशित मिति : बिहिबार, फाल्गुन २४, २०७४
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले आइन्दा मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई घुस नखुवाउन उद्योगीहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले यसअघि प्रधानमन्त्रीहरु समेत शून्य सहनशीलताको नारा लगाउँदै दोब्बर भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप लगाए ।
‘यसभन्दा अगाडि मन्त्री बनेपछि असुली गर्ने, कर्मचारी असुलीमा सहभागी हुने र तस्करहरूले हाम्रा कर्मचारीलाई घुस ख्वाउने गर्थे । उद्योगीहरुले पनि हाम्रा कर्मचारीलाई घुस ख्वाउँथे ।,’ मन्त्री यादवले भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला उद्घाटन कार्यक्रममा भने, ‘अहिलेसम्म हामीले आफ्ना लागि मात्र काम गर्‍यौँ, अब यस्तो चल्दैन ।’
उनले प्रधानमन्त्रीहरु पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्ने अनि आफैँ भ्रष्टाचारमा लाग्ने गरेको आरोप समेत लगाउँदै मन्त्री, प्रधानमन्त्री र कर्मचारीहरुलाई पेश्की रकम नदिन उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्रीहरु पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्ने तर दोब्बर भ्रष्टाचार गरिदिने,’ उनले भने, ‘अब तपाईंहरुले पनि पेश्की दिन बन्द गरिदिनुहोला । गलत काम गर्न नलाग्नु होला । जसले घुस ख्वाउँछ, त्यसको काम हुँदैन । जसले घुस खान्छ, त्यसको त हालत के हुन्छ हुन्छ ।’
‘अब हाम्रो कमान्डर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्नुभएको छ । तपाईंहरु तयार हुने कि नहुने ?’ मन्त्री यादवले उद्योगीहरुलाई सोधे । ‘हाम्रो कमान्डरले गडबड गर्नेको केही कुरा सुन्नुहुन्न । तपाईंको मन्त्रीले यसो गर्‍यो भनेर कमान्डरलाइ सुनाएर पनि हुँदैन । अब सिपाहीले अन द स्पट कारवाही गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ ।’
हामी गडबड गर्नेलाई एकचोटि मिनाहा गरिदिन्छौँ, हिजो केके गर्नुभयो मिनाहा भयो । तर धेरै गलत काम गर्नुभएको छ, देशै डुबाउने काम गर्नुभएको छ भनेचाहिँ मिनाहा हुँदैन ।’
उनले अब अर्थतन्त्रको आकार छाताजस्तो नभइ पिरामिडजस्तो बनाउनुपर्ने तर्क पनि गरे ।
‘दुईचार जना अर्बपति, खर्बपछि भएर देश धनी हुँदैन । कति देशमा यस्ता अर्बपतिले हाम्रो देशको बजेट जतिको घर नै बनाएका छन् । तर त्यही देशमा भिखमङ्गाको ताँती हुन्छ । त्यो देश के धनी ? हामी यस्ता धेरै देशभन्दा राम्रो छौं । अब छाताजस्तो होइन, पिरामिड जस्तो अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।’
उनले उद्योगी र कर्मचारीका एउटै विभागबाट चारवटा संगठन खादा लगाइदिन आउनाले मन्त्रीहरुलाई काममा बाधा परेको गुनासो पनि गरे । ‘हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईंहरु, अब म तपाईंहरुलार्इ भन्छु यस्तो नगरिदिनुहोला,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
बुधबार अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले कांग्रेस सभापति एवम् निर्वतमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पुर्नस्थापना गर्न माग गर्दे रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण नगरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु कानुन विपरित भएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको अधिवक्ता न्यौपानेको तर्क छ ।
रिटमा देउवा सरकारलाई पुर्नस्थापना राखी त्यही सरकारबाट संसद अधिवेशन आह्वान गर्न समेत माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोलीमा खिया लाग्यो, यस कारण दिक्क छन् जनता !
हस्तमैथुन नगरी एक बर्ष बिताउदाको पल !! सकिएला त ? जान्नुहोस
यसरी लिक भएको थियो जापान काण्ड देखि नेपालका टप ५ काण्डहरु !
अल्लारे प्रेमले दुवैको सहमतिमै यौन सम्बन्ध १३ वर्षमै गर्भवती !